AMISOM oo u badashay Dhulbeereedkii Somalia goobo lagu beero Xashiiska+ Akhriso Warbixin Xasaasiya – Hornafrik Media Network
HornAfrik waxay ogaatay in Sannadihii ugu dambeeyay ay Dhul Beereedka Gobaladda Shabeeladda Hoose iyo Shabeeladda Dhexe isku badaleen Goobo lagu beero Maandooriyaha Xashiishka oo ay iibsadaan Cidamadda AMISOM.
Dalagga ugu badan ee hadda ka soo go’a Beeraha Shabeelooyinka ayaa ah Xasiishad, Waxaana Beero waawayn oo ay ka soo go’I jireen Dalag Manaafacaad u leh Dalka iyo Dadka ay hadda isku badaleen Goobo lagu beero Maandooriyahaasi, Waxaana arrintan ku lug leh Saraakiil ka tirsan Ciidamadda AMISOM, Milatariga iyo Nabadsugidda, siday ogaatay HornAfrik.
Saraakiil AMISOM ah iyo Saraakiil Soomaali ah ayaa Shirko ku ah ka ganacsiga Xashiishka, waxayna ka soo iibsadaan Beeralayda Goboladda Shabeelooyinka oo u arkay Fursad dhaqaale inay beeraan Maandooriyahan oo aan uga baahnayn inay geeyaan Suuq, balse looga dhex iibsanayo Beertooda. Waxaana ay ka helaan Dhaqaale ka badan kii ay ka heli jireen Dalagga caadiga ah ee ay beeri jireen.
Jawaano Xashiis Ah Oo Loo Soo Wado Muqdisho
Gaadiidka Ciidanka iyo Gaadiid kale oo yar yar ayaa ka soo qaada Dhul Beereedka, waxaana loo iibgeeyaa Xeryaha Ciidamadda AMISOM ee ku kala yaala Labada Shabeelle iyo Muqdisho, iyadoona howsha ka dhex iibinta AMISOM ay qaabilsan yihiin Saraakiil ka tirsan Ciidankooda, kuwaas oo ay Shirko ku yihiin Saraakiisha Soomaalidda ah howsha ka ganacsiga Maandooriyaha Xashiishka.
HornAfrik waxay ogaatay in Dhul Beereedkii Shabeelooyinka ay hadda isku badaleen 60% goobo lagu beero Xashiishad, iyadoona uu hoos u dhac ku yimid beerashadda Galayda, Masagadda, iyo Qudaarta lagu beeri jiray Beerahaasi, taasoo sababtay in Cuno yaraan ay soo wajahdo Suuqyadda Somalia.
Mid ka mida Beeralayda Shabeelaha Dhexe oo la hadlay HornAfrik ayaa sheegay in dhamaan Beerihii ku teedsanaa Beertiisa ay isku badaleen Beero Xashiis, taasoo uu wal wal xooggan ka muujiyay, Wuxuuna intaasi ku daray in Beerashadda Xashiishka ay sidoo kale saamayn ku yeelatay Deegaanka, Balse waxa uu ku dooday inaysan ka hadli Karin howshan oo ay ku lug leeyihiin rag hubaysan.
Wasaaradda Beeraha oo ay la xiriirtay HornAfrik wax jawaab ah kama bixin arrintan, Sidoo kale Talisyadda Ciidamadda Somalia iyo AMISOM ayaan ka soo jawaabin Email-ay u dirtay HornAfrik oo doonaysay inay faah faahin ka hesho arrintan.